Harka Dhiqannaa – siifsiin
DHIBEEN HARKAAN NAMATTI DARBA
”Tokkoon tokkoon konkolaataa gara keenyatti dhufaa jiran hubannee ilaaluu barbaachisa” jechuudhaan ajajaan waraanaa tokkoo loltootasaa barsiisa.Diinni dhoksaadhaan daangaa cabsee seenuu yaala garuu karaan inni irra dhufu miilaan deemuuf itti fagaata. Kanaafuu konkolaataadhaan akka hindhufne hubachuu qabna.Tokkicha daangaa keenya keessa seennaan ofirraa loluun nutty ulfaata.
Waraana isa dhugumaa keessatti diinni akka daangaa cabsee hiseenne dammaqanii eeguun murteessaadha
Daangaa fayyaa ofii keenyaa yoo fudhannes tooftaan lola waraanasaa waluma fakkaata.
Fayyaan keenyas diina qaba.Diinni fayyaa keenyaa Jarmii jedhama.Jarmoonni bakka hunda jiraachuu kan malan yootahellee, uumaan isaanii ijaan kan hinmullanne hedduu xixiqqoodha.Garuu yammuu keessa keenya seenan wal horanii dhibee nutti tahuu dandahu.Dhibee kanaan dhukkubsatanii kan du’anis hedduudha.Naannoo keenyattis ijoollee hedduutu garaa kaasaadhaan( yaasaadhaan) du’aa jiru.Garaa kaasaan dhibee jarmiin namatti fidudha.
Diinni daangaadhaan ala jiru nama hin miidhu.Yoo daangaa cabsee seene garuu,miidhaa jabaa uumuu dandaha.Jarmiinis akkasuma.Heduun isaaniimmoo qaama keenya keessa kan seenan karaa afaan keenyaatiini.
Jarmoonni ofiisaaniitiin qaama keenya keessa seenuu waan hindandeenyeef garuu yaaddahuu hinqabnu.
Gaaffiin keenya garuu jarmoota ijaan arguun hanga hindandahamnetti afaan keenya seenuuf dhiisuu isaanii akkamiin beekuu dandeenya kan jedhudha.
Kana hubachuuf haala jarmoonni ittiin deeman beekuu nubarbaachisa.Jarmoonni uumee xixiqqoo kan ijaan hin mullanne waan tahaniif ofii isaaniitiin asiif achi deemuu hindandahani.Kanaafuu konkolaataa ittiin keessa keenya seenan qabaachuu isaan barbaachisa.
Konkolaataan isaaniii kun maal akka tahe beektuu laata?
Konkolaataan jarmootaa, harkuma keenyaa dha.
Qaamota keenya dinqisiisoo tahan keessaa inni tokko harka keenyadha.
Mee maal maalfaa akka ittiin hojjennu yaadaa.Ittiin hojjenna,ittiin barreessina,harka walqabnee ittiin nagaa walgaafanna,ittiin nyaanna…waahunda harka keenyaan hojjenna wanti nyaannullee utuu hinhafin harkaan qabamee ,qophaayee,harkumaan nyaatama.
Kanaafuu yoo of eeggachuu baanne, jarmoonni harkuma keenyaan afaan keenya seenuu dandahu jechuudha.Meeshaalee fi bakka jarmootaan faalame yoo harkaan qabanne jarmoonni harka keenyatti qabatanii hafu. Harka sanaan immoo yoo afaan keenya qabanne, keessa keenya seenu jechuudha/yoo harka sanaan nyaata qabannes,harka hin dhiqanneen nyaata qophaa’es kan nyaatu hundi jarmii liqimse jechuudha.
Yeroo nagaa walgaafachuuf harka walqabnus jarmoota harkaan walitti dabarsina Kanaafuu harka ofii saamunaadhaan dhiqachuun hedduu barbaachisaadha.
Bakka qulqullina hinqabne geenyee yemmuu deebinu,fakkeenyaaf,mana fincaanii,yeroo dhaqnee itti tajaajilamu,harki keenya jarmootaan faalamuusaa beekuu qabna.Kanaafuu battaluma sanatti harka keenya bishaaniif saamunaadhaan dhiqachuu qabna.
Utuu hin nyaatinis tahe, utuu nyaata bilcheessuuf qaqqabuu hin jalqabin dura, harka keenya bishaanii fi saamunaadhaan dhiqachuun kan barbaachiseefis jarmoota harka keenyarra dhabamsiisnee dursinee qulqullaa’uufidha.Jarmiin bishaan qofaan harka namaarraa hin qulqullaa’ani.Kanaaf saamunaadhaan dhiqachuu qabna.
Kanaafuu qulqullina ofiikeenyaa,kan ijoollee keenyaa fi kan firoota keenyaa eeguuf harka keenya bishaaniif saamunaadhaan haadhiqannu !
Yeroo hunda Mana fincaaniitii yemmuu deebinu Erga taa’aa daa”immanii haxoofnee booda Utuu nyaata hintuqin dura,harka bishaaniifi saamudhaadhaan dhiqachuun baayi’ee barbaachisaadha !
Maxxansa keenya kan itti aanu keessattimmoo akkaataa harka dhiqachuudhaan fayyummaa keessanii fi kan maatii keessanii ittiin eegdan isin barsiifna.
Previous Previous post: Walaloo Qubee Afaan Oromoon
Next Next post: Maafan aadaa deemaa?